जस्टिन बिबर महिला शौचालय छिरेपछि…
चर्चित गायक जस्टिन बाइबर अमेरिकाको चर्चित फास्टफुड चेन रेस्टुरेन्ट ‘टाको बेल’ स्थित महिला शौचालयबाट बाहिर निस्कँदै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । गत अप्रिल १९ मा फोटोपत्रकारले उनलाई यस्तो अवस्थामा क्यामेरामा कैद गरेका हुन् । २४ वर्षीय बाइबर किन महिला शौचालयमा छिरे ? के उनी अन्य पुरुषका अगाडि पिसाब फेर्न चाहँदैनन् वा पुरुष शौचालय प्याक भएका कारण उनले महिला शौचालय प्रयोग गरे ? भन्ने कुरा खुलेको छैन । बाइबर...
त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडान शुरु, अन्तर्राष्ट्रिय अझै अनिश्चित
काठमाडौं, ७ वैशाख– मालिन्दो एयरको विमान धावन मार्गमा भासिएपछि अवरुद्ध बनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान शुरु भएको छ । विमान बिहीबार राति धावन मार्गमा भासिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरकि दुवै उडान प्रभावित भएका थिए । आन्तरिक उडान केहीबेर अघिबाट शुरु भएको त्रिभुवन विमानस्थलले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक उडान शुरु भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने अझै अनिश्चित छ । धावन मार्गमा धस्सिएको विमान हटाउने प्रयास भइरहेकाले छ । उडान अवरुद्ध हुँदा...
घुस लिएको भिडियो टिभीमा, लिने व्यक्ती चर्का चर्की गर्दै लाईभमा । घुसको पैसा यसरी बाढ्छ प्रहरी !
भिडियो हेर्नुहोस ...
रोजगारीबाट घर फर्किने नेपालीमार्फत सुन तस्करी
काठमाडौं, ५ वैशाख– सुन तस्करहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई समेत तस्कर बनाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर घर फर्किन लागेका नेपालीमार्फत तस्करहरुले सुन तस्करी गराउन थालेका हुन् । घर फर्किन लागेका नेपाली कामदारलाई बाटो खर्चसहित केही रकम दिएर तस्करहरुले सुन नेपाल पुर्याउन लागेका छन् । प्रहरीले विदेशबाट काम गरेर स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई तस्करीको सुनसहित पक्राउ गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीमार्फत सुन तस्करी हुने गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले...
काठमाडौं । धादिङका हरिकरण शाहका ७ वर्षिय छोरालाई हर्नियाको समस्या भएपछि शल्यक्रिया गर्ने दक्ष चिकित्सक नभएको भन्दै जिल्ला अस्पतालले काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा रिफर गरिदियो । हरिकरण छोराको उपचार गर्न गत कात्तिकमा काठमाडौं आए । तर छोराको शल्यक्रिया गर्नका लागि ८ महिनापछि मात्र पालो आउने चिकित्सकले बताए । “निजी अस्पतालमा जान पैसा छैन, सरकारी अस्पतालले ८ महिनापछि मात्र शल्यक्रियाका लागि पालो आउँछ भन्छ,” उनले भने, “जिल्ला जाने आउने गर्दा अहिलेसम्म...
१५ वर्षीया एक किशोरी मृतावस्थामा फेला
रुपन्देही, ४ वैशाख – स्थानीय ओमसतिया गाउँपालिका–६ स्थित वृन्दावनमा आज १५ वर्षीया एक किशोरी मृतावस्थामा फेला परेकी छन् । सोमबार बेलुकादेखि हराइरहेकी उनी घरबाट डेढ मिटर टाढा खेतमा मृतावस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “उनको घाँटी थिचेर हत्या भएको हुन सक्ने आशङ्का छ तर विस्तृत विवरण शव परीक्षणपछि आउला”, उहाँले भन्नुभयो । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । ...
काठमाडौँ, ४ वैशाख – मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठको पहिलो सातादेखि नियमित २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जेठको पहिलो साताभित्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । नेपाल पर्यटन पूर्वाधार विकास परिषद्ले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘पर्यटन नीति र पूर्वाधार विकास’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले विमानस्थलको विद्यमान हवाई चाप (एयर ट्राफिक) व्यवस्थापन गर्न विमानस्थल २१ घण्टा...
दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा, सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई
काठमाडौँ । १२ दिनपछि बसेको एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले विवादित विषय सुल्झाउन नसकेपछि एकताको जिम्मा दुई अध्यक्षको काँधमा आएको छ । मंगलबार तीन घन्टा बसेको बैठकले विवादित विषय किनारा लगाउन नसकेपछि कार्यदलले सुझाएको वैशाख ९ को एकताको तिथि लगभग टरेको संकेत दुवै पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘फाइनल टच दिन बाँकी रहेकाले’ ९ गते नै एकता गर्न असम्भव देखिएको बताए । “भोलिदेखि नै नेताहरू सरकारले...